Yini okufanele igcinwe engqondweni ngenkathi ikwakhiwa kwe-backlink efanele ye-SEO ephezulu?
Asikho isidingo sokuthi ukwakheka kwe-backlink efanelekile kwe-SEO ngendlela efanele kuneminye imininingwane efihliwe okufanele igcinwe engqondweni yiwo wonke umphathi webmaster nomnikazi wesayithi. Lokhu kuyiqiniso, ikakhulukazi ngoba yonke inqubo yokudala backlinks efanelekile engasoze walimaza rankings yakho inezinyathelo eziningi nezinhlangothi. Futhi kaningi ukugcina kude nokuthungatha izinto kubonakala kube inselele kunokuba iningi lethu lingacabanga. Kungakho ngezansi ngizokukhombisa ezinye zezingodo ezivame kakhulu mayelana nesakhiwo sokuxhumanisa kwekhwalithi. Yazi ukuthi yini okufanele igwenywe ngazo zonke izindleko - noma okungenani imiswe ngokushesha lapho uthola khona kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi. Ngisho noma yimaphi amaphutha alandelayo angakwazi ukuguqula ngisho nezimpendulo zakho ezifanele kakhulu zibe yingcezu engenamsebenzi engenayo engenayo - cishe nhlobo. Okungaphezulu - uma kuziwa ngokweqile, isixhumanisi esisodwa "esiyingozi" singathinta ngokungahambisani ukusebenza kwakho okuhlala njalo kwe-SEO ngesikhathi eside.
Ungcono okungenani ubheke kancane lapha. Ungaweqa amaphutha akho ecacile - zibuze nje uma unayo yonke into ekhona, futhi iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ngeke neze ixhunywe:
noma yikuphi amawebhusayithi noma amabhulogi anegama elibi noma elisolayo (ukungasho lokho okuvinjelwe kakade ohlwini lwe-Google);
emithonjeni engenzi lutho, noma yiziphi izindawo ezinokuxhumana nezimboni eziningi, ezifana nokuphinga, ukugembula, noma ikhemisi;
imithombo yenkampani yangaphandle ebukeka njengamawebhusayithi ajwayelekile, amabhulogi, noma amaforamu kodwa anezinhlamvu ze-backlink ezibonakalayo ezibonakalayo kumaphrofayela abo okuxhumanisa, noma zinikeza ukudayiswa kanye / noma ukushintshaniswa.
Konke kufanele kube nokuzichaza ngaphandle kwalokhu, njengokufaka isicelo kunoma yikuphi okukhethwa kukho okushiwo ngokusemthethweni kungase kubangele ukulimala kokusesha kwakho okwamanje, kunokuba ujabulele ukuthuthukiswa okulinganiselwe kwecebo lakho SEO esikalini. Uma senze ngisho nezinto ezicacile zicacile ngokungenasici, ngezansi, ngizoveza ukuthi mhlawumbe kunezimbalwa eziyingozi kunazo zonke kodwa okwamanje zingaphansi kwamaphutha. Uma kuziwa ekwakheni ama-backlink afanelekayo, nansi okuvame ukubulala lo mdlalo:
Umbhalo ongalungile we-anchor
Ungalokothi uthathe ama-anchor text anchor random futhi ungawasebenzisi ngendlela emnyama. Ngiyincoma ngokuqinile ukuthi ngifinyelele ngokujulile kulo mbandela, ngoba kuphela amahange anempahla ebonakalayo abheka ngokwemvelo angathuthukisa ngempela ukuguqulwa kwakho. Iqiniso elibi ukuthi ukuthi i-anchor engalungile noma eyingxenye engafanele ngokuphelele yombhalo ungakunikeza ama-backlink ahle kakhulu futhi afanelekile ngenxa yesizathu sangempela sokubeka phansi, noma ngisho nesijeziso sombhalo.
Ukusetshenziswa okungalungile kweDoFollow / ChaKulandela izimfanelo
isifundo ngokujulile ngokujulile. Yiqiniso, i-DoF kuphela ye-Backlink kuphela engakwazi ukuhlangabezana nezidingo ze-SEO esikalini. Ngesikhathi esifanayo - uma uphatha noma uhamba kancane nje - konke kuyoba nemiphumela emibi kakhulu.
Ukunyuka okungeyona embi
Masibhekane nakho - noma ngabe unenhlanhla enhle ngokuthola imithombo eminingi enhle neyethembayo yokwakha uxhumanisa naye, akufanele neze uphumelele - nje ukusebenzisa wonke amathuba amasha emahoreni amaningana noma ubusuku bonke. Futhi noma yikuphi ukukhushulwa okubukhali - kungaba ngekhwalithi yokuxhumanisa noma ubungakanani - akuyona neze into okufanele idunyiswe ngayo. Khumbula, ukwakha izixhumanisi ezifanele ezizokukhonza unomphela ngokusebenza kwazo okuhle ku-SEO - konke ngokulingana Source . Ungalokothi uziqine ukuzibuza futhi: Ingabe konke kubukeka ngokwemvelo? Uke wachitha isikhathi esanele ukhetha imithombo efanele? Ingabe uqinisekile ukuthi yonke into mayelana ne-backlink isendaweni futhi yenzelwe injongo ecacile kuphela?